दुलाहा दुलही भेषमा यी ३ सेलिब्रेटी : पूजाको बेहुला आकाश कि सौगात ? - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०७, २०७६ समय: १६:०४:२५
ईटहरी/ अहिले चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’को छायांकन सकिएको छ । शिशिर राणको निर्देशनमा चलचित्रको अब गीतमात्र खिच्न बाकीँ छ । चलचित्रमा पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, सौगात मल्ल र श्रृष्टी श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको छ । यस्तैमा निर्माण पक्षले चलचित्र छायांकनको केही तस्विरहरु सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक तस्विरमा पूजा शर्मा बेहुलीको भेषमा सजिएकी छिन् ।
सौगात मल्ल र आकाश श्रेष्ठ दुबै जना बेहुलाको भेषमा छन् । यहाँ निर्माण पक्षले दर्शकलाई सस्पेन्समा राखेको छ, आखिर पूजाको बेहुला को ?एक तस्विरमा पूजा र आकाश एकसाथ देखिएका छन् । तसअर्थमा पूजा आकाशको बेहुली बनेकी हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, चलचित्रको मुख्य पात्र सौगात मल्ल भएका कारण यसमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । पूजाको बेहुला जो होस्, तर सार्वजनिक भएका तस्विरमा पूजा, आकाश र सौगातलाई निकै सुन्दर देखाइएको छ । दिपक मनाङ्गे र अ. देवि राईको लगानी रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्माता किरण नेपाली र रधु परियार हुन् । कमेडी जनरमा निर्माण भएको चलचित्रमा सोहित मानन्धर, सुरक्षा पन्त, राजाराम पौडेल, बिन्दा खतिवडा, जयनन्द लामालगायतको पनि अभिनय रहेको छ ।